약 78 % yevatungamiri funga kuti zvirimo ichiri ramangwana rekushambadzira uye kuti brark ndimambo. Hazvifanire kushamisika.
0.1 Nhau Dzakaita Sekare Kana Nguva.
1 Kuwedzera nyaaya mu 블로그
2 마자 노 에쿠 타 우라 냐야
2.1 Batsiro # 1 : Kuwedzera Kubatanidzwa
2.2 바트시와 # 2. 미라 쿤제 kweboka revanhu
2.3 Batsirwa # 3. 반후 바차 예우 카 즈 비뇨와 즈 바코
2.4 Batsirwa # 4. Vaverengi Vachatendeukira kuva 팬
3 Mienzaniso Yezvikwata 우치 산 디야 냐야
3.1 불안한 치 폴레
3.2 무샤 우예 빈두 무 파로
3.3 프로 블로거
4 Zvigariro zvekuwedzera kuudza nhau mu 블로그 블로그 yako
5 Kutaura Nhau uye 소셜 미디어 마케팅
6 이즈 위 라코
Nhau Dzakaita Sekare Kana Nguva.
Vatori vekutanga vakagovera nyaaya pamadziro ehugaro hwavo, kunyora mavhima makuru uye nyaya dzevarwi. Kutaura nenyaya kunotiita kuti tigare uye ticherechedza, kunoita kuti titarisire, uye tisunge isu tose pamwechete.
Paunomira uye uchifunga nezvenhau, iwe nokukurumidza unoziva kuti vanoomerera nesu kwenguva yakareba kudarika chokwadi chinokosha.
Funga nezve firimu rako raunofarira. Ndedzipi nhoroondo dzeiyo bhaisikopo? Zvino, funga nezvekupedzisira nhamba yawakaverenga. Ndeupi Ane ushingi muziso repfungwa dzako? IYI Ingangoita nyaaya yacho, nekuti pfungwa dzako dzinongo chengeta iro ruzivo zviri nani.
Kuwedzera nyaaya mu 블로그
Kugovera Mabhuku Zvirokwazvo ndiyo yakanakisa yekuita nhau, nokuti unogona kushandisa mavara, mifananidzo, uye kunyange video kuti uwane nyaaya yako.
weHoffman Agency의 CEO 인 Lou Hoffman은 블로그 iyo inotarisa pamashoko ekutaura에 있습니다. Anoti Iwe Unofanira kufunga 쿤제 kwebhuku rekunyora nyaaya kana zvasvika kune mabhizimusi mabhizimusi.
Kana zvasvika kune zvekutengeserana kwebhizimisi, kunyora nyaya nehurukuro yaro yekare -kurondedzera nekutanga, kuguma, uye chimwe chinhu chinopararira zvakanyanya pakati-kazhinji
haigoni kushandiswa. ASI, nekukwereta maitiro akafanana anowanikwa munhau, kunyengedza nekusaziva zvakafanana, bhizimisi rekutengeserana rinova rinonakidza uye naizvozvo rinonyengetedza.
Lou Hoffman anopawo zano pa microblog yake Nhoroondo-Techniques.com, kuti mabloggi atarise nezvekusimba, mutambo, uye izwi, pakati pemamwe mazano. Anowanzodaidza kudzidzisa vatema nyowani mune zvebhizimusi kutaurirana, zvichireva kuti icho chakakosha mune chero bhizimusi bhurogi kuedza. 호프만 anosimbisa kuti nepo nzira dzekutaura nyaya dzichikosha mukubloga, haisiyo yetsika nyaaya yawakakura nayo. Panzvimbo iyoyo, Tarisa nekuwedzera zvikamu zvengano, 세쿠 다라 훈후 후 카마, 카나 쿰웨 쿠 카카 바라 쿠쿠 리라.
마자 노 에쿠 타 우라 냐야
Nancy A. Shenker inopa mu 허 핑턴 Post uye inoshandisa 블로그 Musikana Akaipa, Bhizimisi Rakanaka.
낸시 anotsigira izvo zvimwe zvidzidzo zvaratidza. "Sezvo kutarisa kwevanhu kunotarisana nekuderera (pasi kusvika kuA8 초), zvinyorwa zvepaIndaneti (uye nevanyori varo) zvinofanira kushanda zvakaoma kutora muverengi."
낸시 anogovera zvinyorwa pamablogi ake uye mamwe mabhuku anowanzobudirira kazhinji anosanganisira nyaaya yekutaura.
Zvinyorwa zvangu zvinoshanda zvikuru zvine hanya-kutora kana kuti mifananidzo yakajeka.
낸시 에이 n 커
Vanhu Ndaneta Nekuona 스톡 아트. Kunyanya kuveko kwega 그래픽, zvirinani. 이즈 보 zvakare zvakanaka kuenderana nechimwe chinhu chomunhu uye chinonakidza, asi pakupedzisira chinoita kuti chive chakakodzera kune muverengi. Kunze kwekunge iwe uine juzi kana sordid memoir, kana uri mukurumbira, hapana munhu anonyatsoda kunzwa nezve hupenyu hwako kunze kwekuenderana nehupenyu hwevaverengi, zvakare.
Shenker anotaura kuti zvakanakisisa kuita kuti muverengi azive nyaaya iyo ingashandise sei kune hupenyu hwake, kunyanya kwebhizimisi kana kuti-kubhengisa sei.
Batsiro # 1 : Kuwedzera Kubatanidzwa
Pane zvakawanda zvakabatsiro zvekubatanidza nyaya yekunyora mubhogi rako. Zvichida rubatsiro rwakanyatsojeka kuri kuwedzera kubatanidzwa nevashanyi venzvimbo. Alex Turnbull akanyora nyaaya yekudzidza pamusoro pokuti sei kutaurirana nyaaya kwakawedzera Groove의 블로그 yekudyidzana ne300 %.
턴불 anorayira kuvhara zvinyorwa zvako munyaya huru. Anofananidza zvakagadzirwa nemishonga uye nenyaya yekunyora kumasipi uye anotiudza kuti tivhare mishonga mumasipi kuitira kuti inakidze.
그루브 akasarudza kuita kumwe kupatsanurwa kuedza. Vakamhanya mapeji maviri epositi. 림웨 리시 나 냐야 우예 림웨. Icho chinyorwa chaisanganisira nyaaya yacho chaiva ne300 % vamwe vashanyi vakatsvaira kusvika pasi pepositi, zvichienderana neye asina nyaaya yacho. Pamusoro peiyo, muvhareji nguva iyo vashanyi vakashandisa pamusangano uye nyaaya yacho yakapetwa kashanu pane 야 카심와 쿤제.
바트시와 # 2. 미라 쿤제 kweboka revanhu
kutaura nyaaya mumablog ako ezvinyorwa ndeyekuti iwe uchave wakasarudzika kubva kune vako vanokwikwidza에 대한 이미지가 없습니다. Nhau dzaunotaura dzakasarudzika uye ndizvo zvinozobatsira yako post kuti iwedzere kuyeukwa kupfuura iya yevanokwikwidza vako.
Kubva panguva iyo vanhu vakatanga kuungana vachipoterera 곰바 remoto uye vakagovana nyaaya dzekuvhima kwezuva, murume ave anoda tamba yakanaka. Muchokwadi, pfungwa dzedu dzakanyatsokodzera kupindura kutaurwa.
Maererano ne 빠른 빠른, tinopedza kumativi e65 % ezuva achitaurira nyaaya kune mumwe kune mumwe.
Kushandisa madimikira kune zvazvinoita pauropi yemuverengi. Mune 2012 Emory University Yekudzidza, Masayendisiti Akawana kuti kana zvirevo zvekongiri zvaisanganisira kuumbwa zvakamisa iyo 감각 피질.
이디 노 chikamu cheropi iyo inodzora pfungwa uye izvi zvinogona kuvandudza kusangana. Paiva nedzimwe nzira dzekubatanidza uropi nenzira inoshanda iyo yakawedzerwa kubatanidzwa, kusanganisira zviito zvekutenderera nekudzivisa tsanangudzo dzinodarika.
Batsirwa # 3. 반후 바차 예우 카 즈 비뇨와 즈 바코
Nokuti vaverengi vachabatanidzwa zvakanyanya, ivowo vachave vakanyanya kukurangarira kuti basa rako raiva chii. 가나 냐야 야초 iine chinhu icho muverengi anokwanisa kuita, ipapo acharangarira kuti angashandisa sei ruzivo muupenyu hwake. Nhau dzinoyeukwa pamusoro 22 nguva dzinopfuura kungoziva chokwadi.
Batsirwa # 4. Vaverengi Vachatendeukira kuva 팬
Haiche 님이 yechinangwa chikuru cheblog chero ripi rekushandura vashanyi vesaiti kuti vvat vateveri? Kunyangwe iwe unganidza mazita uye maemail kune erutsamba runyorwa, kana ivo vanongodzokorora 블로그 yako zvakare uye nekudzokorora, kushandura vashanyi kuve vateveri kunobatsira bhurogi rako kukura nekufamba kwenguva.
Vavengi vakazvipira vane mikana yekugovera zvauri kuitika mumasangano ehupfumi uye nemhuri, shamwari, uye vashandi vebhizimisi pamwe chete.
베테랑 블로거 Neil Patel anogovera yake purogiramu yekudhinda kukura 블로그 yake uye kurova vaverengi ve100,000. Anoratidza kuti akazviita sei nekugoverana nerwendo rwake nekuita kugadzikana mupfungwa nevadzidzi vake kuburikidza nekunyora nyaaya.
Anotaura zvakare kuti mifananidzo inobatsira kutaurira nyaaya uye inowanidza kuti Facebook zvinyorwa zvinosanganisira mufananidzo zvine chikwata chapamusoro chekuita.
Mienzaniso Yezvikwata 우치 산 디야 냐야
Kwemakore apa WHSR, ndakabvunzurudza akati wandei eema 블로거 akasiyana. Chinhu chimwe chete chandakaona nezvevanonyatsoblogga mabloggi ndechekuti vanoshandisa kutaura nyaaya dzimwe nguva. Heano mamwe eanonakidza 블로그 블로그 zvandauya nazvo zvinosanganisira kutaura nyaaya :
불안한 치 폴레
무파 나니 조 : 불안한 치 폴레
Marye Audet-White, uyo ane 블로그 Restless Chipotle inotsanangurira huwandu hwemagariro evanhu sechimwe chinhu chakanakisisa chaanoita icho chinotungamirira motokari kune bhagi 갈퀴. 이요 블로그 inopa mapeji akasiyana-siyana, ayo angaita seakanaka akachekwa uye akaomeswa pamusoro, asi Marye anowanzozviisa pachepa yake.
Somuenzaniso, anonyora nezve butterscotch 오트밀 쿠키, sharign iyo ruzivo rwakanga rwakafuridzirwa nekapepa rakanyorwa nemai amai vake vakasiya. Izvozvi zvakafanana 네 키키는 yaidya mwana를 임 포치했습니다. Anosangana pamwoyo, nokuti isu tose tine chiyeuchidzo chekudya kubva paudiki hwedu. 이 아 노브 바 apinda mune tsanangudzo pamusoro pekuita makiki. Muverengi atove akabatwa.
무샤 우예 빈두 무 파로
심바 레 무샤 네 진두 무 파로
Jeanne Grunert ndiye Munda 웨 먼다 우에노 니 오라 pamusoro pemiti yekurima. Anoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyora nyaaya yekukwevera vaverengi mumabhuku 아케 에부 쿠.
Mumwe muenzaniso wekunyora nyaaya pa blog yake unogona kuwanikwa mumutambo Dongo re 컨테이너 채소밭. Anotanga nokutaura nezvehurukuro yachangobva kupa uye kuti achapindura sei dzimwe nguva mibvunzo yaanowana paanenge achinyora pamusoro pevhu. 이즈 비 zvinokwevera muverengi kumucheto nekuita kuti aenzane nevakasangana semusangano.
yeProblogger 게시물 스크린 샷.
ProBlogger inowanikwa naDarren Rouse, asi inopa zvinyorwa kubva kune ma 블로거 akasiyana-siyana. Chimwe Chezvinhu zvose zvinyorwa izvi zvakafanana mune imwe nzira yekutaura nyaaya.
Jim Stewart, nyanzvi yeSEO, anonyora nezvekushandura nzvimbo uye nekubatana kwe SEO paProBlogger. Anotanga mutsara nemashoko pamusoro pomutengesi we 오스트레일리아 uye zvino anobatanidza nyaaya iyo kukurumidza uye nei ichikosha.
EH는, 손오공 kusiya edu anoshamisa mabloggi 파노 쿠 WHSR. Vanyori vedu vanowanzo shandisa kutaura nyaaya kuendesa vaverengi. 이수 tinotsvaga izvo zvakasarudzika zviwanikwa, vanobvunzurudza nyanzvi, uye taura nyaaya kuratidza chitsidzo kana kupa muenzaniso. 임웨 chinyorwa chinobatanidza zvese izvi zvinhu ndeye yedu veteran munyori Luana Spinetti.
Muchikamu chake 7 Nhau dzekutsanangura nyaaya dzekutsvaga 블로그 yako 독자, Luana anotanga nokutaura pamusoro penyaya yake pachake ne 틈새 블로그.
Anobva apfuurira kugovera nyaaya dzevamwe, dzakadai saAlex Limberg, 윌 블런트, nalex Turnbull.
Izvi zvinongova zvishomanana zvezvimwe zveblogi zvinosanganisira kuverenga nyaya. Hazvina Mhosva Kuti Kuverenga kwako kwakakura sei, unogona kubatsirwa nekubatanidza zvishoma maitiro ekutaura nyaaya.
Zvigariro zvekuwedzera kuudza nhau mu 블로그 블로그 yako
아이즈 비노 zvaunoona zvikonzero zvakawanda zvakanakira kuwedzera zvinyorwa zvemashoko mumabhuku ako ebhulogi, unogona kushamisika kuti unogona.
Semuenzaniso, ngatiti iwe unomhanya bhurogu kune varidzi mabhizinesi madiki uye iwe unoda kunyora posvo nezve kuchengeta mapepa kune yako yekupedzisira gore yemitero.
Izvozvo zvinonzwika zvakanaka uye zvinomesa uye zvakaoma.
Zvisinei, iyou unogona nyore nyore kuwedzera nhaurirano munyaya iyi nenzira shomanana dzakasiyana :
Taya nyaaya yako pachako nezvenguva yausina kuchengetedza mapepa ako akarongeka, 아카 옹 고르와, uye zvichidhura iwe $ 2500.00.
Taya nyaaya yomunhu waunoziva uyo aifanira kunge akachengetedza mapepa emitero.
츠 바가 냐야 이리 파인 다 네티, 타 우리라나나요, 이타 즈카 카레, 우예 엔다.
Taura nyaaya kubva pakuona kwemuverengi. Heuno muenzaniso :“Munopokana gore rega rega kuti muuye nemapepa kuzopedzisa mutero? Inguva ingani iwe yaunotambisa kudhonza makorokodzwa akafuma kubva pasi pe desiki rako dhizaini? Ko kana uchigona kuchengetedza nguva nemari mukuita mutero uchingove uri kugadzira faira rakarongeka? “
Gadzira nyaaya inhema. 가나 이와시나 야야, 우에 카카와 나 임비, 즈 카카 나카 쿠 이타 마 미리로. Ini Nandakangoita Izvo Pamusoro APO Ini Nndakaita Iyo Mock Post Pamusoro Pemitero.
Kutaura Nhau uye 소셜 미디어 마케팅
Kutaura nhau kunoshandura kunyange kushandiswa zvakanaka pakushandiswa mune zvemagariro evanhu. Izvo hazvisi kukanganisa kuti kushamwaridzana kwemashoko ezvehupfumi kunofanirwa kumabhizimusi nhasi. Iko kune Vashandi vanosvika mamiriyoni e1.71 pa 페이스 북, uye imwe 320 mamiriyoni에서 트위터. Munenge mamiriyoni e27 ezvinyorwa zviripo anogoverwa pane zvekugarisana nevamwe mazuva ose.
Aku, kunzwisisa kuti nei vanhu vakasarudza kugovera zvimwe zvehupenyu uye kwete vamwe vanogona kuita mutsauko mukuru mukutengesa kwakawanda kwaunowana pane zvekugarisana nevamwe.
지바 소셜 미디어 플랫폼
쿠 탕가, 쿠완 비사 치카 무 차코 차 우리 쿠투 미라, 쿠티 라 쿠티 우고 네 쿠 친자 냐야 야초 파치 쿠바. Nhau pa 트위터 yakawanda shomanana nemasikirwo pane Nhaau paGoogle +. Nhau pa Instagram ichava yakanyanya kuisa pfungwa pakuudza nyaya nemifananidzo, nepo nyaya iri pa Facebook ichasvika kumifananidzo nekunyora.
Shandisa Maonero Anooneka
Kugadzira zvisikwa zvinoonekwa zvinobatsira marongerwo ekubatana zviri nani nevateereri vavo uye inobudisa mamwe mashoko asingakanganwiki. Kubudirira kwekutengesa hakusi kungoendazve kumari zvakare, kutengeserana kwemazuva ano kwave kwakanyatsogadzirisa uye vatengi centric.
Mashoko nemavhidhiyo kana mifananidzo zvinowanzova nekutaura kukuru kubva kuvateveri. Taurira nyaaya yako nevhidhiyo pfupi uye chikwata kune mamwe mashoko pawebsite yako. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vasingatori nguva yekuverenga zvinyorwa, vachaona vhidhiyo inotsigira ruzivo. 라이브 라이브 zvinokubvumira kuti uende munguva chaiyo uye uite vateereri vako.
출처 : 디자인 디자인 마법사.
산디 사 마 바라
Kunyange pamapuratifomu, akadai se Instagram kana SnapChat, Unogona kushandisa zvinyorwa zvekutaura nyaya yako kune muverengi.
Zvakanakisa kuita nyaaya ipfupi uye kusvika pacho, kana kungokurudzira kukurudzira kuti uwane rumwe ruzivo. Sezvo aya mapuratifomu anoonekwa nemasikirwo, Vateereri Vangangodaro vasingatenderi mavara 아카 레바 mavara.
Shandisa Nyaya yeZvifananidzo neZvamwe
Imwe pfungwa inokubatsira iwe kutaurira nyaaya pane zvekugarisana nevamwe ndeyekugadzira mutsara wemifananidzo uye zvinyorwa zvese zvakabatana neshoko rimwechete.
Somuenzaniso, kana iwe ukanyora nhaurwa pamusoro pekuvandudza gwara rako regorofu, iwe unogona kuumba mifananidzo yemapikicha ane mazano mashoma sezvinyorwa zvinotora muverengi kubva pakusarudza kambani yakarurama yekutevera-kubuni.
Sarudza nhau hashtag uye tanga nhaurirano yepa Twitter pachirongwa chemashoko ako. 이와 노우 고나 kutanga nekugovana chibatanidza kune chinyorwa uye wozokurudzira vateveri kubvunza mibvunzo kana kutanga hurukuro.
이즈 위 라코
Chimwe Chezviyo Zvekutaura Nah Yakanaka Ndeyako Iwe Pachako Inzwi Rako.
이디 엔디 (iyi ndiyo nguva yakasiyana-siyana yekunyora kwako). 곰팡이 nezveshoko rako 세 초초 chinhu chauri kugovana neshamwari kana iwe uchimuudza nyaaya pamusoro pekombe yekofi. Inzwi ndiwo maonero ako akasiyana-siyana enyika, nenzira yaunonyora mazwi pamwechete, uye kunyange rwiyo rwekunyora kwako. Nzira yakanakisisa yekukudziridza izwi rakasimba uye yakasimba kunyora nyaya ndeyokunyora. Kana Iwe Unonyanya Kunyora Uye Kuwana Mhinduro Kubva Kune Vadzidzisi Uye Vanyori, Simba Rako Rinowedzera kukura.
Nzira yekuwedzera nayo Google 애드 센스 muShokoPress